जापान-नेपाल सम्बन्ध थप उचाइमा पुर्‍याउन प्रयत्नशील रहने छु : जापानी राजदूत किकुता « Nepali Digital Newspaper
जापान-नेपाल सम्बन्ध थप उचाइमा पुर्‍याउन प्रयत्नशील रहने छु : जापानी राजदूत किकुता
युताका किकुता नेपालका लागि जापानी नवनियुक्त राजदूत हुनुहुन्छ । जापानको परराष्ट्र मन्त्रालयमा कार्यरत कूटनीतिज्ञ किकुता हालै नेपालका लागि राजदूत नियुक्त हुनुभएको हो । यसअघि उहाँ नाइजेरियाका लागि राजदूत हुनुहुन्थ्यो । त्योभन्दाअघि उहाँले भुटानमा डेपुटी चिफ अफ मिसन र सन् २०१५ मा भारतमा पनि डेपुटी चिफ अफ मिसनका रुपमा रहेर काम गर्नुभएको थियो । यसअघि थाइल्याण्ड, नेदरल्याण्डलगायतका देशमा रहेका जापानी मिसनमा रहेर काम गर्नुभएका एक अनुभवी कूटनीतिज्ञ किकुता हालैमात्र नेपालका लागि जापानी राजदूतमा नियुक्त हुनुभएको हो । राजदूत किकुतासँग राष्ट्रिय समाचार समितिका वरिष्ठ कार्यकारी सम्पादक सोमनाथ लामिछाने र कार्यकारी सम्पादक एकराज पाठकले जापानी दूतावासमा गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
० महामहिम राजदूतज्यू, नेपाल र जापानबीच जनस्तरमा र सरकारीस्तरमा पनि विगत लामो समयदेखिको निकै सुमधुर सम्बन्ध रही आएको त यहाँलाई विदितै छ । यो सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउनका लागि यहाँले आफ्नो कार्यकालमा के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ ?
सबैभन्दा पहिला त नेपालजस्तो देश जहाँ विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा छ र जहाँका नागरिकले ‘जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी’ भन्ने मान्यतालाई अघि सार्ने गर्दछन, यस्तो देशको राजदूतका रुपमा नियुक्त हुन पाउँदा मलाई निकै खुशी लागेको छ । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ का लागि म नेपाल सरकार र नेपाली नागरिकसँग आगामी दिनमा सहकार्य गरेर अघि बढ्न चाहन्छु । हो, नेपाल र जापान निकै लामो समयदेखि सुमधुर सम्बन्ध र असल मित्रका रुपमा अघि बढिरहेका छन् जुनकुरा म एकछिनमा बयान गर्नेछु । नेपाल र जापानबीचको सम्बन्धमा त मेरो दिमागमा पनि कतिपय अविस्मरणीय क्षणहरु पनि छन् । यस्तो सम्बन्धको जगमा रहेर यसलाई थप प्रगाढ बनाउनका लागि म पनि मेरो कार्यकालभर प्रयत्नशील रहने छु । मेरो यस्तो रणनीति छ कि म यहाँ रहुञ्जेल मैले धेरै भन्दा धेरै नेपाली नागरिक, नेपालका उच्चस्तरीय नेता, उच्च सरकारी अधिकारीसँग भेट तथा अन्तरक्रिया गर्नेछु । त्यसैगरी सम्भव भएसम्म म नेपालका धेरैभन्दा धेरै स्थानको भ्रमण पनि गर्नेछु ।
त्यसपछि नेपाली नागरिकले सन् २०१६ को अप्रिलमा जापानको कुमामोतोमा गएको भूकम्पबाट प्रभावितहरुलाई दालभात पकाएर खुवाएका थिए । सन् २०१५ मा गएको नेपालको भूकम्पपछि जसरी जापानले सहयोग र सदभाव दर्शाएको थियो त्यस्तैगरी कुमामोतोको भूकम्पमा पनि नेपालीले सहयोग गरेका थिए र उनीहरुले जापानले पुर्‍याएको सहयोगको सराहना पनि गरेका थिए । यसरी यस्ता अप्ठ्यारा परिस्थितिमा पनि दुई देशका सरकार र जनताका बीचमा भएका सहृदयी सदभावका यी उदाहरणहरुले पनि नेपाल र जापानको सम्बन्ध पारस्परिक सहयोग र सम्मानका साथ अघि बढेको प्रमाणित भएको छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।
० पूर्वाधार विकास, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा सहयोग गर्दै नेपालको विकासका प्रयासहरुमा जापानले एक प्रमुख दाता राष्ट्रका रुपमा सहयोग पुर्‍याउँदै आएको त विदितै छ । विकसित विश्व परिवेशमा नेपालका उद्यमीहरुले जापानी लगानी, प्रविधि र प्राविधिक सहयोग नेपालमा कसरी आकर्षित गर्न सक्लान् ? नेपाली उद्यमीहरुको यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि जापानी दूतावासले के कस्तो सहयोग गर्न सक्छ ?
० महामहिम, कोभिड-१९ को महामारीले विश्वभर नै रोजगारी, आर्थिक अवसरमा व्यापक क्षति पुग्नुका साथै स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता आधारभूत सेवाको पहुँचमा असर पुगेको छ । जापान सरकारले नेपालजस्ता मुलुकलाई कसरी सहयोग पुर्‍याउने सोचिरहेको छ ?
आउँदा दिनहरुमा जापानले कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइँमा अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँगको साझेदारीलाई निरन्तरता दिनेछ । प्रमुख सात औद्योगिक राष्ट्रको समूह (जी७) र क्वेड (जापान, अमेरिका, भारत, अस्ट्रेलिया) का सदस्य मुलुकले निम्न प्रतिबद्धता छन्-
–समूह सातका रुपमा हामी कोभिड–१९ लाई परास्त गर्न मिलेर कार्य गर्नेछौँ (जी), फेब्रुअरी १९०
० भविष्यमा नेपाल र जापानबीच के कस्ता क्षेत्रमा सहयोग हुनेछन् ? दुवै देशले दिगो साझेदारी कसरी विकास गर्न सक्लान् ?
हामीले के बुझेका छौँ भने लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा नेपाल प्रयत्नशील रहेको छ र जापानले पनि सुशासनका लागि नेपालसँग मिलेर कार्य गरिरहेको छ । सन् २०२२ मा अतिकम विकसित मुलुक (एलएलडिसी०)बाट माथि जाने नेपालको लक्ष्यलाई जापानले प्रोत्साहित र मद्दत गर्न चाहेको छ, र नेपाल सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको देशमा रुपान्तरण हुनेछ । यो कार्य नेपाल सरकारको गरिबी न्यूनीकरण कार्यक्रम मार्फत हासिल गर्न सकिने छ ।
हामीले एलुम्नाई मार्फत नेपाली समाजका धेरै क्षेत्रमा पुगिरहेको योगदानलाई पनि यहाँ प्रशंसा गर्न चाहन्छौं । जापानबाट अनुभवप्राप्त यी व्यक्तिले जापानलाई आफ्नो दोस्रो घर सम्झिरहेका हुन्छन् । विद्यार्थी आदानप्रदानका अलावा सन् २०१९ मा अर्को नयाँ अवसर सिर्जना भएको छ । नेपालीका लागि जापान सरकारले ‘विशिष्टीकृत दक्ष कामदार’ कार्यक्रममा समेटेको छ जसबाट नेपाली दक्ष व्यक्तिले जापानमा गएर काम गर्न पाउने छन् ।
हामी दुई देशबीचको पर्यटन क्षेत्र अरु विस्तारित होस् भन्ने चाहिरहेका छौँ, किनभने पर्यटनले हाम्रो विश्वमा नयाँ परिदृश्य सिर्जना गरिरहेको हुन्छ । दुःखलाग्दो कुरा के भने नेपाल भ्रमण वर्ष सन् २०२० अभियानलाई कोभिड–१९ ले असर पु¥यायो । तैपनि, नेपाल एयरलाइन्सबाट हुने जापान र नेपालबीचको सोझो हवाई उडान यात्रुका लागि निकै महत्वपूर्ण हुनेछ ।
गएको वर्ष हामीले सगरमाथा आरोहणमा पहिलो जापानीले आरोहण गरेको स्वर्ण वर्षगाँठ मनाएका थियौं । जापानी आरोही उमुरा नाओमी र मात्सुरा तेरुओले यो सफलता हासिल गर्नु भएको थियो । र फुकुशिमा निवासी महिला जुन्को ताबेईले सगरमाथा आरोहण गरेको पनि ४५ वर्ष पुगेको छ । उहाँ सगरमाथा आरोहण गर्ने विश्वकै पहिलो महिला आरोही बन्न सफल हुनु भएको थियो । कोभिड-१९ मा सुधार भएलगत्तै हामीहरु धेरै नेपालीलाई जापानमा स्वागत गर्न चाहन्छौं, ताकि उहाँहरुले जापानी संस्कृतिका साथै परम्परागत खाना ‘वाशोकु’ को स्वाद लिन पाउनु हुनेछ । त्यस्तै, धेरै जापानी पर्वतारोही र यात्रा गर्न रुचि राख्ने व्यक्ति पनि नेपालको भ्रमण गर्न प्रतिक्षारत छन् ।
० जापानमा नेपालप्रतिको दृष्टिकोण कस्तो छ ? के यसअघि तपाईं नेपाल आउनुभएको थियो ? कुनै स्मरणयोग्य क्षण छ ?